Amakhemikhali we-Organic, Furfural, Heat Stabilizer - Shuiyuan New Energy Technology
IShenxian Shuiyuan New Energy Technology Co, Ltd. esungulwe ngo-2000, etholakala esifundazweni Shandong, thina ifektri nomkhiqizi ezikhethekile umkhiqizo Dibenzoylmethane (DBM) futhi furfural. Njengomunye wefektri enkulu kunazo zonke emhlabeni yokukhiqiza ngobungcweti iDibenzoylmethane (DBM) enomthamo waminyaka yonke wamathani we-10,000 metric, njengomunye wabakhiqizi abangochwepheshe abaphezulu emhlabeni onobungako bamathani wamathani we-30,000 waminyaka yonke.
Silwela ikhwalithi yomkhiqizo kwasekuqaleni futhi sigade ngokuqinile ikhwalithi yomkhiqizo wayo yonke inqubo.
Ifektri yethu ikhule yaba ngumkhiqizi oqinisekiswe uNdunankulu we-dibenzoylmethane ne-furfural.
Yaqalwa ngo-2000, thina ifektri umkhiqizi ezikhethekile umkhiqizo Dibenzoylmethane (DBM) futhi furfural.
IShenxian Shuiyuan New Energy Technology Co, Ltd. esungulwe ngo-2000, etholakala esifundazweni Shandong, thina ifektri nomkhiqizi ezikhethekile umkhiqizo Dibenzoylmethane (DBM) futhi furfural.